महिला हिंसाका प्रमुख कारण र यसलाई घटाउन यस्तो छ सुझाव - MeroReport
Posted by Ganesh Thagunna on December 9, 2014 at 2:55pm in Have your Say
मैले महिला हिंसाका प्रमुख कारण के हुन सक्छन ? र महिला हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन के गर्नु पर्ला भनि २७ जना नागरिकलाई सोधेको थिए । उनीहरुको प्रतिक्रिया यस्तो रह्यो ।
1. भूपी धामी– महिलाको आर्थिक मक्ष कमजोर हुनु, प्रतिकार गर्न नसक्नु, आत्मबल कमजोर पार्नु, परिवारको साथ नपाउनु, सुचनाको ज्ञान नराख्नु नै महिला हिंसाका प्रमुख कारण हुन् । यी कुरामा ध्यान दिए महिला हिंसा घट्ने निश्चित छ ।
2. दुर्गा जोशी– महिला हिंसाका प्रमुख कारणहरु,बलात्कार, यौनहिंसा,माद्धक पदार्थ, बहुविवाह, बेचबिखन, दाइजोको निहुँमा सम्भावित बेचबिखन, आत्महत्या, सा मूहिकबलात्कार, बेपत्ता महिला, बेपत्ता बालिका र वैदेशिक रोजगारीलगायत देखिन्छन् । महिला हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ । र यसलई घटाउन महिला आफैले सचेत हुनुपर्छ ,महिला हिंङ्सा अन्त्य गरौं समाजमा सुख शुनिश्चित गरौं, जस्ता नारा र कार्यक्रमको सन्चालान गर्नुपर्छ ।
3. धर्मराज भट्टराई अभागि– पुरुषको दाँजोमा महिलाहरु अशिक्षित हुनु र पुरुषबादी समाज नै यसका कारण हुन सक्छन् । यसका लागि महिला लाई सबै कुरामा अबसर दिनुपर्छ ।
4. खेमराज साउद– महिला नै महिलाद्वारा पिडित भएका छन् । पहिला महिलाले महिला माथि गर्ने हिँसा अन्त्य हुनुपर्दछ, तब मात्र समाजमा महिला हिँसा कम गर्न सकिन्छ नत्र जे जस्तो प्रयास गरे पनि बालुवामा पानी हाल्नु मात्र हो ।
5. हरिश गुरुधामी– महिला हिंसाको प्रमुख कारणहरु, अशिक्षा , सामाजिक अपहेलना (जाड रक्सी, दाइजो प्रथा, गरिबी, घुम्टो प्रथा,आदि ) र सामाजिक कुषस्कार । महिला हिंसा कमगर्न छोरीलाई पनि छोरा सरहको शिक्षा दिनु पर्छ । छोरा स्कुल छोरी घाँस दाउरा र चुलो चौकोमा नै सिमित राख्न हुँदैन ।
6. गोबिन्द वि.के. सिद्धान्त– दाईजो प्रथाका कारण महिला हिंसा हुन्छ , अनि सबै भन्दा ठूलो कुरा महिलालाई कुनै पनि ठाउँमा हेपिन्छ । बिवाहमा मिल्ने जिवन साथी नै सबै भन्दा ठूलो दाईजो हो । यो भन्दा ठूलो दाई जो के चाहियो ?
7. दिनेश चन्द– गर्भपतन गरेर महिला हिंसा गरिन्छ ।
8. ललित बोहरा– महिला हिंसाको प्रमुख कारण पुरुषहरुको मदिरा सेवन हो । किनकी पुरुषहरु दिनभर भट्टीमा बसेर रक्सी पिएर आउने र घरमा श्रीमतीलाई कुट्ने गरेका छन् । गाली गलौच गर्ने गरेका छन् । यसलाई रोक्न पर्छ ।
9. एनडि प्रकाश बिष्ट– महिला हिंसा हुनुमा महिला र पुरुष दुबै जिम्मेवार छन् । पुरुष र महिलामा व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ ।
10. सुरेन्द्र प्रसाद बोहरा– जनचेतनाको कमी छ, जनचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।
11. सूर्य बोहरा– महिला हिंशाको मुख्य कारण उनीहरु बिचको हिनताबोध हो । त्यसपछि पुरानो संस्कार रुढिबादि निरन्तरता पनि हो । आरक्षणमा ३३ प्रतिशतले मात्रै पनी मख्ख भईरहेको अवस्था छ, त्यो त्याग्नुपर्छ । अनि अधिकारबादीहरु जहाँ महिला हिंसा हुन्छ, त्यहाँ नगएर सहरतिरै समय, पैँसा फाल्ने काम गरिरहेका छन् । त्यो सबै कुरा स्थानीय पिडित भेगमा हुनुपर्छ तब हुन्छ परिवर्तन ।
12. सरु जलन– अशिक्षाका कारण भनौ भने शिक्षित मान्छेबाटै महिला हिंसा भईरहेको छ । त्यसैले मेरो बुझाईमा महिला हिंसाको प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज हो ।
13. बिष्णु अवस्थी– महिला हिंसाका कारण महिला नै हुन ।
14. लक्ष्मी प्रसाद जोशी– अशिक्षा नै प्रमुख कारण हो ।
15. उधब बिके– महिला हिंसाका प्रमुख कारणहरु, कानुनको खिल्ली उडाउदै सरकालेनै दोषीहरुलाई ७/८ बर्षको को सजाय दिएर आफनो नियम ुरा गरे झैँ गर्नु हो । मुख्य दोष कानुन कमजोरीका कारण हो की भन्ने ठहर छ ।
16. सजन थापामगर– महिलालाई हेर्ने गलत दृष्टि प्रमुख महिला हिंसाको कारण हो । यसई कमि गर्न परुष साथिहरुले माधक सेवनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो । महिलाई गलत या पाप नजर बाट टाढा राख्नु पर्यो । र महिला मित्रहरुले पनि पहिला त आफुपनि महिला हो भन्ने कुरो बिर्सनु भएन ।
17. प्रेम चन्द– जनचेतनाको अभाव छ । त्यसैगरी कानुन कमजोर छ जस्तो लाग्छ । कानुनलाई कडा बनाउनु पर्छ ।
18. दिपक बोहरा– 1.कारण- महिला र पुरूष दुबैको मानसपटलमा जकडिएर रहेको पृतिसत्ताबादी सोच र ब्यवहारको निरन्तरता, पुरूषकै मात्र पछयपोषण गर्ने बिश्वका सबै धर्मग़न्थहरू र समाजमा त्यसको दरिलो नजीर । 2.समाधान- न्ययिक, समानतामुलक र बिभेद, शोषण बिरूद्द शिछ्या र जनचेतनाको ब्यापक प़सार, न्ययिक कानुनको प़भाबकारिता ।
19. जगन्नाथ पाठक– महिलाहरुको मन मर्जीले काम गर्ने तरिका हटाउनु पर्छ तब मत्र हुन्छ ।
20. नबीन कठायत– महिला हिंसाको मुख्य हात भनेको महिला नै हुन । यिनीहरुले नि सचेत हुनुपर्छ । घमण्ड धेरै हुन्छ, फेसन लुगाबाट पनि हुन्छ । महिलाले आफ्नो घमण्डको अन्त्य गर्नु हुन्छ भने महिला हिंसा आफैबन्द हुन्छ । मेरो बिचार यहि हो ।
21. चन्द्र प्रसाद भट्ट– कारण भन्नु पर्दा पुरुषहरुको मदिरा सेवन र आफ्नै परिवारले पनि सम्मान गर्न नसक्नु लगायतका रहेका छन् भने, सूझाव भन्नुपर्दा, जनचेतनाका नाममा छुट्ट्याईने खर्च पनि सही ठाँउमा उपयोग भएको देखीन मैले, त्यसैले त्यता तिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक होला र अर्को कुरा रोकथाम गर्न आफै सचेत हुनु जरुरी देख्छु ।
22. तुलजंग कुँवर– महिला हिंसाका कारणहरु हाम्रो समाजमा मौलाउदै गएको मदिरा सेवन,महिलाहरु प्रति गरिने दुव्र्यवहार नै हुन यि समस्याहरु समाधान गर्न आम नागरिकहरुमा सचेतिकरणका कार्यक्रमहरु गरिनु पर्छ ।
23. दिपक– महिलाहरुको पहरन नै प्रमुअ देख्छु । महिलाले आफ्नो पहिरनमा सुधार ल्याउनु पर्छ । अनि स्वभाव बिग्रदै गएको छ, त्यो पनि सुधार गर्न पर्छ ।
24. कृष्ण पौडेल– महिलाको फेसनले बढेको हो । बलत्कारीलाई फासी दिने कानुन हुन नसक्नु ।
25. जनक कुँवर– महिला हिंसाका कारणहरू, अशिक्षा, गरिबी तथा विरोजगारी आदि हुन । पुरूषहरूको महिला माथिको नकारात्मक सोच राख्नु एउटा कारण हो । उनीहरूमाथि गरिने दुर्व्यवहार कम गर्न नसक्नु अर्को कारण हो ।
26. चन्द्रदेव भट्ट– सुदूरपश्चिममा मदिराका कारण महिला हिंसा हुने गरेको छ । यो कम गर्नको लागि रक्सी बिक्रिबितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । अनि मात्र महिला हिंसाका घटनामा कमी हुने देखिन्छ ।
27. दिपक थापा– अशिक्षा र बेरोजगारी महिला हिसाका कारण हुन सक्छन् ।